Nagarik News - नक्कलीमा नवीन
होमपेज / कला / संगीत / नक्कलीमा नवीन
नक्कलीमा नवीन	26 Jul 2013 | 08:45am शुक्रबार ११ श्रावण, २०७०
स्मृति ढुंगाना	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
काठमाडौं - गायक नविन के भट्टराई बिनाक्यापमा बिरलै देखिन्छन्। उनी जहाँ पनि क्यापमै हुन्छन्। बिनाक्याप कस्ता देखिएलान्् नविन? धेरैलाई यो जिज्ञासा हुनसक्छ। तर यो कौलुहलता उनले मेट्ने भएका छन्। एक म्युजिक भिडियोमा उनी क्यापबिनै देखिएका छन्। 'यदि मैले गिटार नसमातेको भए' नामक म्युजिक भिडियोमा उनी क्याप छाडेर कृत्रिम कपालको सहारा लिएका छन्। पवन पौडेलद्वारा निर्देशित म्युजिक भिडियोमा उनले कृत्रिम कपाल लगाएका छन्। बिहीबार लाजिम्पाटमा सुटिङ भइरहँदा उनले असजिलो महसुस गरिरहेको अनुमान जो सुकैले लगाउन सक्थ्यो। सुटिङ क्रममा उनी घरीघरी हात टाउकोमा पुर्यासइहाल्थे। निर्देशक पौडेलले एक्सन भनिसक्दा पनि उनी झुक्किएर हात कपालमा पुर्यातउँदै। दर्शकहरू हाँसेर त्यसको प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। 'कृत्रिम कपाल हालेपछि इन्डोर सुटिङमा गर्मी धेरै हुने रहेछ,' सुटिङमा सहभागी श्रीधर पौडेलले सुनाए, 'नेपाली संगीत क्षेत्रमा २५ वर्ष बिताए पनि पहिलोपटक १६ वर्षअघि फर्किएको अनुभव भएको उनले सुनाइरहेका थिए।' लामो कपाल पाल्ने नवीनले १६ वर्षअघि प्रहरीको डरले कपाल काटेका थिए। एसियन म्युजिक कम्पनीले बजारमा ल्याएको नवीनको नयाँ एल्बम 'काठमाडौं' को प्रवर्द्धन गर्न भिडियो तयार गरिएको हो। यो एक साताभित्र रिलिज हुने निर्देशक बताउँछन्। 'यो गीतले मेरो प्रतिनिधित्व गरेको छ। गिटार समातेपछि मैले संगीतमा लाग्ने सोच बनाएको भाव गीतले बोकेको छ,' गायक नवीनले भने। उनले एल्बममा काठमाडौंको जीवनशैलीलाई प्रस्तुत गरेका छन्। 'राजधानीको जीवनशैलीबाट प्रभावित भएर एल्बमको नाम जुराएको हुँ। यो गीतले सबैलाई सुरुवाती दिनमा संगीतप्रति हुने मोहको झझल्को दिन्छ,' उनले दाबी गरे। एल्बमको शीर्ष गीत भएकाले केही नयाँ गर्न खोजेको उनले सुनाए। 'मैले गिटार नसमातेको भए इन्जिनियर हुन्थे होला,' उनी भन्दै थिए, 'नयाँ टिमसँगको काम रमाइलो भयो। म फिल्मको हिरो नभएकाले कपालको अनुभव त्यस्तो गरिएन्।' एल्बमका सबै गीत सन्देशमूलक छन्। 'एल्बम रिलिज गरेको तीन दिनमा तीनसय सिडीको अर्डर राजधानीबाट मात्र आएको छ,' संगीतको माहोल नबिग्रएको उल्लेख गर्दै एनले भने, 'अहिले राम्रा एल्बम नआएकाले श्रोताले गीत सुन्न छाडेका हुन्।'उनको नयाँ एल्बम सबभन्दा पहिला अस्ट्रेलियामा रिलिज भएको थियो। म्युजिक कम्पनीले राम्रो सहयोग गरेकाले एल्बम सुन्ने श्रोता बढेको उनको बुझाइ छ। एल्बमको प्रवर्द्धनकै लागि लन्डन र राजधानीमा कन्सर्ट गर्ने तयारीमा नवीन छन्। उनको यो ११ औं एल्बम हो। ९ गीत रहेको एल्बममा सुरेशकुमार श्रेत्री, नविना भट्टराई, सबित भट्टराई र विजय सिवाकोटीले गीत तयार गरेका छन्। सबै गीतमा संगीत उनी आफैं, सुरेशकुमार र राजनराज सिवाकोटीले दिएका छन्। 'स्मृति', 'सम्झना', 'समर्पण', 'द ब्लु', 'नक्षत्र' लगायत एल्बम निकालेका उनी झन्डै ६ वर्षपछि नयाँ एल्बमसहित आएका हुन्। यसबीच उनले 'च्यालेन्ज' नामक फिल्ममा समेत संगीत दिएका थिए। 'हामी संगीततिर लागेका मानिसलाई गीतको चिन्ता हुन्छ। त्यसैले एल्बमको तयारीमा रहँदा 'राजधानी'को थिम सोचेर गीत तयार गरेको थिएँ,' उनले भने। यो एल्बमको तयारीमा चार वर्ष खर्चिएर गीतहरू छानेको नवीनले बताए। « कम्पनीले रोयल्टी नदिएको आरोप
दिउँसो देखेको सपना »
पचास वर्ष धकेलिए नारायण!काठमाडौं– भूकम्पका कारण लेखक नारायण ढकालको नयाँ उपन्यास ‘वृषभ वध' विमोचन नगरीकनै बजारमा आएको छ। प्रकाशक फाइन प्रिन्टले विमोचनको तयारी गर्दै गर्दा भूकम्प आएको थियो। पाठकको मागका कारण पुस्तकलाई ढिलो...	सिनेमा हलमा दर्शक फर्कंदैकाठमाडौं-महाभूकम्पको पराकम्पनले तर्साइरहे पनि सामान्य मर्मतसम्भारपछि केही सिनेमा हलहरु सुचारु हुन थालेका छन्। राजधानीका विश्वज्योति, गोपीकृष्ण मुभिज, पुष्पाञ्जली, क्युएफएक्स अन्तर्गतका जयनेपाल र कुमारी, बिग सिनेमा, राइजिङ मलस्थित क्युज सिनेमाज् लगायत...	परदेशिनेहरुका ‘जिम्दा सपना’काठमाडौं– राजधानीको कालिकास्थानस्थित सर्वनाम रंगमञ्चमा राज शाह लिखित–निर्देशित ‘जिम्दा सपना’ मञ्चन भइरहेको छ। नाटकले बोकेको कथाका कारण दर्शकहरुले यसलाई रुचाइरहेको निर्देशक राजले बताएका छन्। ‘हामीले भारी–भरकम कुनै विषय उठाएका छैनौँ,’...	‘अझै पनि' र ईशाको जम्काभेटकाठमाडौं– नेपाली फिल्म ‘अझै पनि' युनिटले बलिउड अभिनेत्री ईशा देवललाई भेटेको छ। प्रचारप्रसारका लागि भ्रमणमा रहेको फिल्म टोलीले पोखराबाट फर्कने क्रममा कुरिनटारमा रहेकी ईशालाई सोमबार भेटेको हो। भेटमा ईशाले नेपाली...	मलिना बन्ने भो ‘झम्की'काठमाडौं– पूर्व मिस नेपाल मलिना जोशी ‘ऋतु'पछि फेरि अर्को फिल्म ‘झुम्की'मा नायिका बन्ने भएकी छन्। सोमबार काठमाडौंको मण्डला थियटरमा निर्माण घोषणा भएको ‘झुम्की'बाट ‘ऋतु' फिल्मका एक निर्माता अपिल विष्ट निर्देशनमा...	सिम्पल र स्वीट 'जेरी'यात्राले मान्छेलाई धेरै थोक सिकाउँछ। जेरीले पनि सिक्छ। मुस्ताङसम्म तन्किएको घुमफिरमा उसले थुप्रै हन्डर खान्छ र आफूलाई चिन्ने अवसर पाउँछ।मुस्ताङलाई फन्को लगाउने क्रममा जेरी (अनमोल केसी) र काठमाडौंकी किशोरी आकांक्षा...	रत्‍नजीत र सरादेवी च्याम्पियनकाठमाडौं- साविक विजेता रत्‍नजीत तामाङले चौथो पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय र्याशङकिङ ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा उपाधि रक्षा गरेका छन्। आर्मीका रत्नजीतले आइतबारको फाइनलमा त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर्ड हलमा आफ्नै क्लबका विकास श्रेष्ठलाई...	कला	'द लिटिल प्रिन्स' मा एकसाथ देखिए कर्मा र रेमनदासकाठमाडौं – उढिरहेकाे प्लेन एक्कासी दुर्घटनामा पर्छ। पाइलट (रेमनदास श्रेष्ठ) दुर्घटनाग्रस्त भएर सहारा मरभूमिका खसेको प्लेनबाट...	धमाधम गीत रेकर्डिङमा व्यस्त गायिका अन्जुकाठमाडौं – गायिका अन्जु पन्त धमाधम गीत रेकर्डिङमा व्यस्त छिन्। विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रमको सिलसिलामा विदेश र...	धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सिटी एक्सप्रेसको सहयोगकाठमाडौं– सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई १५ लाख ५५ हजार सहयोग गरेको छ। सिटी...	भारत युवतीका लागि असुरक्षितः अभिनेत्री प्रियमणिमुम्बई–दक्षिण भारतीय अभिनेत्री प्रियमणिले युवतीहरुका लागि भारत सुरक्षित नभएको बताएपछि अहिले चौतर्फी वहश सुरु भएको छ।...	भर्खरै...